नेपाललाई जलवायु शिखर सम्मेलनको निम्तो किन आएन ? - साँचो खबर
नेपाललाई जलवायु शिखर सम्मेलनको निम्तो किन आएन ?
बाइडनले ४० देशका सरकार र राष्ट्र प्रमुखहरुलाई सो कार्यक्रमको लागि निम्तो पठाएका छन् । दक्षिण एसियाबाट भारत, भुटान र बंगलादेशलाई आमन्त्रण गरिएको छ ।
ह्वाइट हाउसले प्रकाशित गरेको विज्ञप्ति अनुसार भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, बंगलादेशका प्रधानमन्त्री शेख हसिना र भुटानका प्रधानमन्त्री लोत्ते छिरिङ सो सम्मेलनमा सहभागी हुनेछन् ।त्यसैगरी, चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङ पनि सो कार्यक्रममा सहभागी हुने छन् ।
यतिवेला विश्वको ध्यान विश्व तापमान वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसमा राख्नेमा छ । अमेरिकाले गर्न लागेको सम्मेलन र कोप–२६ को मूल उद्देश्य पनि यही हो ।